Doorashadda kuraasta Somaliland ee BFS oo dardar ku socota | KEYDMEDIA ONLINE
Doorashadda kuraasta Somaliland ee BFS oo dardar ku socota
Waxaa galinkii danbe ee maanta la shaaciyey, jadwalka kuraas ka mid ah kuwa Somaliland ka soo galaya Golaha Shacabka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Kuraas ay tiradoodu tahay 9 ayey Somaliland ku dooranaysaa maalmaha soo socda magaaladda Muqdisho, waxayna noqonayaa mid si dar-dar ah ku socota.
Kuraasta la shaaciyay ayay Sumadoodu tahay, Hop-202, Hop-214, Hop-218, Hop-223, Hop-228, Hop-225, Hop-210, Hop-272 iyo Hop-208, iyadoo la filayo in ay ku soo baxaan 9 Xildhibaan oo Golaha Shacabka ku matali doono Somaliland.
Doorashada kuraastan oo dhawaan dhici doonto, ayaa waxaa ergada jufada leh lagu wargaliyey in ay soo xaadiraan Maalinta berri ah si loogu furo tababar ku aaddan habka ay u codeynayaan.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, ayaa Guddiga doorashooyinka Gobolada Waqooyi uga mahadceliyay shaacinta jadwalka doorashada 9-ka kursi oo katirsan Gollaha Shacabka BFS, iyagoo horayna u qabtay doorashada 2 kursi.
Rooble ayaa ku booriyey guddiyada doorashooyinka, in la de-dejiyo doorashada Gollaha Shacabka, si dalku inta ka horeysa sanadka cusub uu u yeesho hay'ad sharci dejin ah oo shaqeyneysa.
Somaliland oo ah Maamul Goboleed kal hore ku dhawaaqay gooni isu-taag ayaanan aqoonsaneyn xubnaha Muqdisho u jooga in ay ku matalaan siyaasadda Soomaaliya, iyagoo u arka rag soo shaqa tagay.
Shaacinta kuraastan ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaaliya uu cadaadis badan uga imanayo Beesha Caalamka, kuwaasoo ku baaqaya in si deg-deg ah loo soo gaba-gabeeyo doorashadda dalka, oo iminka ah mid jiitameysa.